DAAWO/SAWIRRO-Waxqabadka Dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay. | Radio Muqdisho
Mogadishu, 17 January 2015 – Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Horumarka Waxbarashada Dalka, Mashaariic horumarineed oo la hirgeliyey, dib u dejinta Qaxootiga, Xubin Al-Shabaab ah oo Dowladda isku soo dhiibay, horumarka Kheyraadka Badda iyo Howlgallo amniga lagu sugayey.
Horumarka Waxbarashada Dalka
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka Waxbarashada dalka ayaa yiri “Jaamicadda SIMAD iyo Hormuud ayaa ardeydii sanadkan qalanjabisay loo sameeyey xaflado lagu dhiiri gelinayo dhameystirka waxbarashadooda isla markaasna lagu guddoonsiinayey abaalmarino kala duwan. Jaamicadda SIMAD ayaa 620 ardey ka qalinjabiyeen kuliyadaha kala ah Dhaqaalaha, Cilmiga Bulshada, Ganacsiga & Xisaabaadka iyo Culuunta Kumbuyuutarrada iyo teknoolajiyada. Sidoo kale Jaamicadda Hormuud ayaa dufcadii ugu horreysey ay dhameysteen waxbarashada Electric Engineering. Ardeydan ayaa lagula dardaarmay inay dhaqangeliyaan waxii ay barteen oo muhiim u ah horumarka bulshada. Guddoomiyaha jaamacadda SIMAD Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen “Odowaa” ayaa sheegey in 620 arday ay sanadkan ka qalinjabinayaan SIMAD. Ardayda qalin jabisay ayuu kula dardaarmay inay danta guud ka shaqeeyaan oo ay ka hormariyaan tooda gaar ahaaneed. Guddoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda SIMAD (Board of trustee) ayaa u hambalyeeyay dufcadda 10aad ee ka qalin jabisay jaamacadda SIMAD. Kulliyad kasta ardayga ugu darajada sareeyay ayaa la guddoonsiiyay abaal marinno ayadoo sidoo kale la abaal mariyay saddexdii gabdhood ee ugu darajada sarreysay dhammaan gabdhaha ka qalin jabiyay jaamacadda.”
Hirgelinta Mashaariicda Horumarineed
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey mashaariicda horumarineed ayaa yiri “14kii Janaayo ayuu Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muunaab” oo ay wehliyaan mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka iyo kan degmada C/casiis ay xariga ka jareen xarun caafimaad iyo waddo dhex martay degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho oo dib u dayactir lagu sameeyay. Guddoomiye Muungaab iyo xubnihii la socday waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay qeybaha bulshada iyo maamulka Degmada, waxaana intaas kaddib guddoomiyuhu socod ku maray qeybo ka mid ah degmada C/casiis oo ay ka socdeen mashaariic horumrineed oo ay ugu horeyso dib u dhiska waddooyinka iyo dhismaha xarunta danta guud ee loogu adeegayo bulshada. Guddoomiyaha Degmada C/casiis Cismaan Muxudiin Cali Cariif oo la hadlay Mashaariicda lagu dhisay waddada iyo xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada ayaa sheegay in ay gacan ka geysteen maamulka Gobolka. Guddoomiyaha Gobolka benaadir mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo isna madasha ka hadlay ayaa maamulka degmada uga mahadceliyay dadaalka ay u galeen dib u dhiska xarumaha danta guud, isagoo shacabka ka codsaday inay xoojiyaan dar dargelinta ololaha nadaafada ee dib loogu soo celinayo bilicdii ay lahayd magaalada Muqdisho. Hirgelinta mashaariicda horumarineed ee lagu dhisayo xarumaha loogu adeegayo bulshada ayaa qeyb ka ah horumarka uu ku talaabsanayo dalka, gaar ahaan tan caasimadda.”
Dib u Dejinta Qaxootiga
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey dib u dejinta qaxootiga Soomaaliyeed ayaa yiri “Maamulka Degmada Luuq ee Gobolka Gedo ayaa guddi u xil saaray dib u dejinta Qoxootiga Soomaaliyeed ee dib uga soo laabanaya xeryaha Qaxootiga ee Dalka Kenya. Gudoomiyaha Maamulka Dagmadaasi Axmed Buulle Maxamed ayaa sheegay in ay diyaariyeen Goobihii ay degi lahaayeen dadkaan, islamarkaasina ay gudi u saareen la socodka xaladaha Socdaalka Qoxootiga oo ka imaanaya dhinaca dagmada Dhoobleey ee Gobolka Jubada Hoose. Waxaana jirtay wacyigelin loo sameeyey bulshada oo ku aadan sidii dadkaas loo soo dhoweyn lahaa isla markaasna loogu fududeyn lahaa inay nolol fiican helaan. Waxa uu intaasi raaciyay inay u sameeyeen Goobo Caafimaad oo u gaar ah dadka Qoxootiga ah ee imaanaya Dagmada Luuq ee Gobolka Gedo. Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa sheegay in gudigaan waajib ka saaran yahay in ay il gaar ah ku hayaan dadkaan ka imaanaya dalka Kenya ee Qaxootiga ah, islamarkaana ay la socdaan wax walbo oo soo wajaha iyo sida loo dejinayo.”
Al-Shabaab isku soo dhiibay Dowladda
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey xubin ka tirsan Al-Shabaab oo Dowladda isku soo dhiibay ayaa yiri “Taliyaha Ciidamada Booliska degmada Luuq ee gobolka Gedo Siyaad Cabdulqaadir Maxamed ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda ay Gacanta ku hayaan Sheikh Cismaan Sheikh Maxamed oo xiriir la soo sameeyay Ciidamada Booliska Dagmada Luuq ee Gobolka Gedo. Sheekh Cismaan Sheekh Maxamed ayaa ka mid ahaa saraakiisha Al-shabaab ugu caansan ee gobalka Gedo, isla markaasna madax u ahaa ciidanka Al-Shabaab ee joogay agagaarka degmada dhanka Bay xageeda, isagana wuu hubeysnaa, ciidanka uu xukumayayna wuu kasoo tagay. Dhinaca kale taliyaha waxa uu intaasi Raaciyay inay jiraan rag kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo la soo xiriiray Ciidamada isaga oo tilmaamay in cid walba oo kasoo baxda Al-shabaab soo dhaweyn doonaan.”
Horumarinta Kheyraadka Badda
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarinta Kheyraadka Badda ayaa yiri “15kii Janaayo ayaa 30 Bad-maax oo muddo lix maalin siminaar ugu socday Muqdisho ayaa loo soo xiray, iyadoo isla markaana ay iska kaashadeen Wasaaradda Kalluumeysiga, Hay’dda Cunnada iyo Beeraha ee FAO iyo Jaamacadda Daarul Xikma. Waxaana xafladda xiritaanka seminarka ka qeyb galay Mas’uuliyiin ka kala socday Wasaaradaha Kaluumeysiga iyo Dekahada, Madaxda Jaamacadda Daarul Xikma iyo kuwa hay’adda FAO. Tababarkan ayaa naaquudayaashu waxa ay ku baranayeen sidii ay naftooda u badbaadin lahaayeen xilliga ay ku guda jiraan howlaha jillaabashada iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen ilaalinta xeebaha Jamhuuriyadda Somalia, sidoo kale in ay ka qeyb-qaataan badbaadinta dadka ay qatarta ku qabsato badda gudaheeda. Guddoomiyaha Jaamacadda Daarul Xikma Yuusuf Axmed Hiraabe ayaa sheegay in tababarkan uu ku soo dhammaaday sidii loogu talagalay, wax bandanna laga wada faa’iiday, isagoo dadki qaatay tababarka ku boorriyay inay ugu adeegaan bulshadooda. Xuseen Cali Axmed Wakiilka Hay’adda FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay in Wasaaraddu ay ka caawini doonaan sidii tababarradan loo sii wadi lahaa, si wax soo saarka Kalluumeysiga loo ballaariyo. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Axmed Maxamed Imaan ayaa sheegay inay wadaan qorsheyaal lagu horumarinayo kalluumeysiga, ayna dalka ka hirgelin doonaan goobo ay kalluumeysato ku keydsadaan kheyraadka ay badda kala soo baxaan. Ugu dambeyntii dhalinyardii tababarka loo qabtay e ka tirsanaa Naaqudiyaasha ayaa lagu guddonsiiyya shahaadooyin.”
Howlgallo Amniga oo la fuliyey
Wasiirka Warfaafinta oo ugu danbeyntii ka hadlayey Howlgallo amniga lagu sugayo ayaa yiri “Hay’adaha amniga ayaa in muddo ahba waday dadaaalo lagu adkeynayo amniga Muqdisho iyo gobollada dalka. Ciidanka Amniga oo wada jira waxa ay Howlgal weyn ka sameeyeen gudaha dagmada Kaxda, waxaana lagu soo qabtay howlgalkaasi Hub sharci darro ah iyo dad lagu tuhunsan yahay iney ka tirsan yihiin Shabaab. Dagmada Heliwa waxaa lagu soo qabtay howlgal Ciidanka Amniga ay ku qaadeen Shakabad katirsan kooxda Shabaab kuwaasoo ku howlanaa sameynta iyo dayactirka Rasaasta Noo nool, waxaana lagu soo qabtay 5-qof oo ku howlana sameynta Rasaastaas iyo warshad macmal ah oo ay ku sameynaayeen. Dagmada Howlwadaag waxaa sidoo lale ka howlgalay cidanka Police ka waxeyna baaaritaano ku sameeyeen guryo iyo gaadiid laga shakisan yahay. Howlgalada sugidda Amniga caasimadda iyo gobolada dalka waa kuwo si joogta ah har iyo habeen usocda.”
Wasaaradda Warfaafinta, [email protected]